Vie qoutidienne – Imahaka
imahaka	dans Uncategorized	 avril 3, 2014 avril 3, 2014 208 Words
Asa mahavelona eto Madagasikara
Vehivavy mihoatry ny 80 no tonga manasa lamba etsy Andohatapenaka amoron’ny ranon’Ikopa isan’andro. 60 hatramin’ny 3000 ariary ny anasana ny lamba, ary 4000 hatramin’ny 6000 Ariary isan’andro no azon’ny olona iray. Asa mandreraka nefa mahavelona ny fanasana lamba raha ny nambaran’izy ireo.
Maraina mandrapahariva ny andro, lamba 70 hatramin’ny 150 no voasasan’ny olona iray. Manodidina an’ny 67 ha, Ankazomanga sy ambodin’Isotry no fakana ireo lamba sasana ireo. Miankina amin’ny toetr’andro no andraisana vola ho an’ireto mpanasa lamba ireto.
Raha tsara ny andro, mandeha ny tsena raha ny filazan’izy ireo azy. Ny mifanohitra amin’izay kosa raha toa ka avy ny orana. Noho ny andro ratsy vokatr’ilay andian-drahona izay nitondra rotsak’orana teto amintsika, nandritra izay telo andro izay, nilaza ho sahirana ireto mpanasa lamba ireto.
Samy efa manana ny mahazatra azy ireto mpanasa lamba ireto, izy ireo no maka sy manatitra izany any amin’ny tompony rehefa madio sy voapasoka tsara ireo lamba, izay vao mandray vola.
Tsy ny manasa ihany araka izany no ataon’izy ireo. Asa toy ny asa rehetra ny fanasana lamba saingy mila faharetana sy fahaiza-manao. Na aiza na aiza alehanao ka ahitana rano eto Andrenivohitra, ahitana mpanasa lamba avokoa. Tsy manaitra ny be sy ny maro intsony kanefa iankinanan’ny fahasalaman’ny isan-tokantrano.